Roberto Mancini oo ka warbixiyay go’aanka Gianluigi Buffon kaga aadan inuu ka fariisto kubada cagta. – Gool FM
(Italy) 24 Maajo 2018. Tababaraha cusub ee xulka qaranka Italy Roberto Mancini ayaa xaqiijiyay in kabtanka xulka Gianluigi Buffon inuu go’aansaday inuusan ku dhawaaqin inuu ka fariisto kubada cagta.
Buffon ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo Juventus Isbuucii lasoo dhaafay, laakiin ilaa iyo haatan, goolhayaha halyeeyga ah ayaan shaaca ka qaadin talaabadiisa xigta inuu ka fariisanayo kubada cagta iyo inuu ku biiri doono koox kale.
Buffon ayaa helay dalabyo badan xiliyadii lasoo dhaafay, waxaana ilo dhowr ah ay xaqiijiyeen inuu aad ugu dhow yahay u dhaqaaqista Paris Saint-Germain ee dalka faransiiska.
Mancini oo ka hadlayay mustaqbalka Buffon ayaa wuxuu yiri: “Wuu ila hadlay Buffon, wuxuuna ii sheegay inuu doonayo inuu baxo kadib marka uu ka dhaqaaqo Juventus, inuu doonayo inuu sii ciyaaro”.
“Buffon wuxuu ii sheegay arintan laba maalin kahor, ka dib markii aan qabtay xulka qaranka Italy, xidig kasta sida De Rossi, Buffon ama ciyaaryahan kale, wuxuu qeyb ka noqon karaa xulka, ma jiraan albaab ka xiran xidig kasta”.
SAWIRRO: Arag Kobaha Cusub uu Maxamed Saalax ku ciyaari doono kulanka sabtida ee Finalka Champions League